Lapho umndeni "nonogolantethe ifika" futhi kuletha ingane, abazali nezihlobo zabo kanye kukhona eziningi. Ngempela, usana endlini - akusiwona kuphela fun, kodwa futhi ezinkulu umthwalo yeminikelo yokuthula yayingifanele wonke amalungu omndeni. Njengoba yaziwa, omama abaningi ukhathazekile ukuthi ingane yabo udla kahle nokululama, elele zwí ubuthongo, ngagula. Kodwa endabeni yokugcina, ngezinye izikhathi zikhona nobunzima, okuyinto sizobe ukukhuluma kancane ngaphezulu.
Uhudo e usana - kuyinkinga evamile ngenxa yezizathu eziningana. Ubuso bakhe cishe yonke abanezingane ezincane. Ngakho, lokho kwenza abantu bakuphathe sifo ingakamiswa ixazululwe ukugaya?
Okokuqala, kufanele licaciswe ukuthi sohudo eseyingane kungaba kungabangelwa ukungondleki kahle noma lactating abesifazane ukuphambuka kusukela ekudleni Kunconywa. ibhilikotsi Ngakho, umama kudliwa, kungangena ukwephulwa okukhulu kwesitulo kwengane yakhe. Nokho, kukhona ukudla umzimba wengane nje akaboni, okungukuthi Angakwazi ukubonisa ezinzima ukusabela iguliswa kubo kuzokwenzeka sohudo. Kulezi zimo umzali unake nje kudingeka aphathe ngokucophelela ekudleni ingane alanda zonke izinto ezixabana nomzimba kungenzeka, kufakwe endaweni yawo imikhiqizo "ephephile". Ngo ezinjalo zokwelapha isithombe sohudo usana iphathwa ngokuzimela ekhaya ngokulungisa evamile imenyu umama nengane. Nokho, ezingane eyaziwa futhi ezimweni ezibucayi ngaphezulu ingane ukuqunjelwa.
Uhudo e usana kungenziwa esibangelwa igciwane emathunjini uwile ngaphandle komzimba. Ezimweni ezinjalo, sikhonjiswa ukuphuza iziphuzo ukuvimbela amanzi emzimbeni futhi ngokushesha uthintane kudokotela wezingane.
Nokho, ngaphambi kokuba ubonane nodokotela, abazali ungasetha uphethwe kwangaphambilini ngesisekelo Ukuhlolwa okubonakalayo sezinyawo ingane yakho. Ngakho, sohudo nosana ngokuba khona kucace Foam nokuhogela omuncu, ukuntuleka isikhwehlela sibonisa lactase ukuntula. Liquid sezinyawo sezinyawo amnyama "Inkulumo ethi" ngokuntuleka ubisi, futhi khona kuzo isikhwehlela sihlangene nokukhathazeka okhushuliwe grudnichka kubangele izinsolo dysbiosis. Amanyela emkhandweni sezinyawo isikhwehlela oluhlaza futhi igazi lihambisana lokushisa ephakeme kanye nokubuyisa kukhona izimpawu ukutheleleka emathunjini.
Njalo umama ibele kumele wazi ukuthi sezinyawo evamile usana sifana umbala lwesinaphi, futhi ukuthungwa, futhi isibalo nsuku zonke wamathumbu ukunyakaza kuhluka izikhathi 2 kuya 5. Iyimbangela yokukhathazeka kufanele kube indle okubi Usana ephelezelwa imfiva, uvalo tearfulness nokuhlanza. Ezimweni ezinjalo, okufanele okubiza udokotela ngokushesha.
Ngaphambi kokujoyina i-wezingane kufanele kugwenywe izicupho yokufakelwa ngokuphelele, futhi ondle ingane kuphela ubisi lwebele, okuyinto yena, iqukethe immunoglobulin, ayisiza zokuzivikela futhi kahle ubuyisela lost in uhudo uketshezi. Uma ingane uhlala ibhodlela, esikhundleni usetshenziselwe ukusuthisa yayo ingxube lactose-free.
Ilindele onguchwepheshe akudingekile futhi ukuzithiba medicate, njengoba isizathu esiyinhloko ezifana ukuphendula okungavamile umzimba wengane namanje abaziwa ngokugcwele, futhi udokotela kuphela kungakwenza ukuxilongwa esiqondile ukucacisa isikimu elikhiqizayo yokwelashwa.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi isifo sohudo ingavinjelwa ngokwenza njalo zonke Kunconywa izinyathelo, kodwa uma namanje kwadingeka uhudo, kufanele sizame ukuqonda isizathu self-ukubonakaliswa okunjalo acute iziyaluyalu emathunjini ngalokho akubona kulowo inabukeni sezinyawo fecal. Ngokuvamile, impendulo efanele futhi ifike ngesikhathi abazali inomphumela emitholampilo omuhle.
Oral zokuvimbela inzalo - indlela evame inzalo
Ukuhamba kwegazi ngokusebenzisa izitsha. Mshini nekulawulwa kwegazi
Sinjani isimo ubugebengu? Criminogenic isimo uhlamvu
Umuthi 'Fermatron ": Izibuyekezo nesineke